I-China Eco-friendly elastic soft-friendly makeup sponge beauty blender Manufacturer and Supplier | UDongmei
I-Eco-friendly elastic soft-friendly makeup sponge beauty blender
Emelana no-oyela futhi engenama-slag, ukulawula kahle uwoyela, ukumelana no-oyela nokungabi nama-slag, futhi hhayi okuqhekekile. Isikhumba-enobungani, eguquguqukayo futhi entekenteke eyenziwe ngobuchwepheshe be-polymer, iphephile futhi ayikho iphunga elehlukile, imnene futhi ibuthakathaka, ayicasuli futhi ayisiye i-allergenic.
Lezi zipanji zenzelwe ukuba ithuluzi elihle lokuxuba. Zingasetshenziswa ngemikhiqizo yezimonyo ezahlukahlukene ukufaka isisekelo, ukhilimu we-BB, impuphu, ukufihla, ukuzihlukanisa, uketshezi, njll.
● Okwe-Powder Noketshezi
Imikhiqizo yempuphu ediphini, njengesisekelo, impuphu evulekile njll., Lapho kwenzeka ngqo ibala bese uphephetha ebusweni bakho lapho usebenzisa izipanji zokwakheka zomile. Ekusetshenzisweni kwemikhiqizo yobisi noma enokhilimu, njenge-BB cream, lotion, concealer, lapho kuqala ukucwiliswa emanzini, noma izomunca izimonyo eziningi, okuholele kudoti.
● I-Spongy Futhi Iyasuswa
Lezi zipanji zokupenda zinobuthi futhi ziyamelana nezinyembezi, ezingeke zikhubazeke ngemuva kwezinsuku zokusetshenziswa. Kulula ukuzisebenzisa futhi zihlanzekile, okwenza kube ukukhetha okuhle kusuka kuzimfundamakhwela kuya kochwepheshe. Kulula ukwandisa inqubo yakho yobuhle ngokusebenzisa lesi sipanji sobuhle esinemisebenzi eminingi.
● Ithambile Esikhunjeni
Yamukela okungeyona i-latex nezinto ezingezona i-allergenic, lezi zipanji zokwenziwa ziyi-Q-ezithambile futhi zibushelelezi ekunethezekeni kwesikhumba. Ziphephile ukusebenzisa. Lawa mathuluzi wokuthambisa athambile, aguquguqukayo ayindlela enhle yokuthola uhlelo olungenazintambo kuzo zonke izisekelo zakho, ama-highlighters, ne-bronzer.
Kulula kakhulu Ukuhlanza:
Manzisa isiponji ngamanzi afudumele, gcoba amaconsi ambalwa wokuhlanza okuncane, bese ugcoba ngesineke usebenzisa iminwe ukukhulula ukwakheka, uwoyela namagciwane.
Cindezela ngokuqhubekayo bese ugeza ngamanzi ahlanzekile, Hlanza isiponji ngaphansi kwamanzi agobhozayo kuze kube yilapho amanzi ecaca.
Geza kuze kungabikho nsalela, ukhiphe amanzi athe xaxa ngethawula lephepha, ugcine endaweni eyomile nenomoya.
Langaphambilini Izithako zamantombazane ezinamanzi nezomile zeqanda lesipanji
Olandelayo: I-Dongshen makeup sponge blender yokhilimu we-powder noma uhlelo lokusebenza lwamanzi
Bath Sponge Isitolo esidayisa yonke impahla
I-Makeup Sponge Isitolo esidayisa yonke impahla
Ilebuli yangasese yobuhle isiponji
Sponge Yenza Up
Isicelo sobungcweti esimise okwe-Dongshen ...
I-Dongshen makeup sponge blender yokhilimu we-powder ...
Dongshen Makeup Sponge Isitolo esidayisa yonke impahla Beveled Surfac ...
I-Dongshen Latex-free ne-Vegan akeup Blender Bea ...
Usizo lwabenza imisenenzi olumanzi nolomile isisekelo ukuhlanganiswa th ...
Abesifazane bezimonyo ezimanzi nezomile isiponji sokwenza izimonyo ...
isethi yokwenza ibhulashi, Ukugunda Izinwele, Ithuluzi Brushes Brushes, Setha i-Makeup Brushes, Yenza amabhulashi, Ukushefa Setha,